Vaovao - Torolàlana ho an'ny haben'ny kodiaran'ny fiara: Tena zava-dehibe izany
Torolàlana ho an'ny haben'ny kodiarana fiara: Tena zava-dehibe izany
Raha tsorina dia izao, arakaraka ny haben'ny kodiaranao dia vao mainka hihazona ny fiaranao eny an-dalana. Rehefa mihabe ny sakan'ny kodiarana dia afaka manarona bebe kokoa ny velaran'ny arabe izy io.
Mpamily maro no tsy mieritreritra firy ny haben'ny kodiarany sy ny kodiarany afa-tsy amin'ny fikolokoloana tarehy. Saingy, ny haben'ny kodiarana - ary ny haben'ny kodiaranao apetrakao aminy. Ny fampiasana kodiarana tsy mety dia mety lafo ary indraindray mampidi-doza aza.
Tena zava-dehibe ve ny haben'ny Tyro?
Raha tsorina, arakaraka ny haben'ny kodiaranao no mahasakana ny fiaranao eny an-dalana. Rehefa mihalehibe ny sakan'ny kodiarana dia mandrakotra faritra ambonimbony kokoa amin'ny arabe izy io. Araka ny voalazan'i iSee Cars, ity fitomboana amin'ny fifandraisana amin'ny arabato ity dia manome ny fiaran'ny anao fiara mifikitra bebe kokoa, mampitombo ny fikirakirany sy ny fahaizany mihetsika.
Ka maninona tokoa ny haben'ny kodiarana? Ny valiny fohy dia: Ie. Fa maninona ny haben'ny kodiarana? Arakaraka.
Ny kodiarana sy ny kodiarana dia tsy teny azo ovaina. Ny kodiarana dia ampahany amin'ny fananganana kodiarana. Ohatra, ny haben'ny fiaranao dia manana habe vita amin'ny peratra, saingy afaka mividy habe amin'ny kodiarana isan-karazany ianao mba hifanaraka amin'ireo sisin-tany ireo, raha toa ka eo afovoan'ny kodiarana no refy marina. Raha ny voalaza, ny fiara manana rims lehibe kokoa dia matetika no afaka mifanaraka amin'ny kodiarana lehibe kokoa noho ny fiara hafa.
Kodiarana lehibe = Volavolan-dalàna lehibe kokoa
Amin'ny ankapobeny, ny kodiarana sy ny kodia lehibe kokoa dia tsara kokoa amin'ny fampitomboana ny fihenan'ny fiara. Na izany aza, ny kodiarana lehibe kokoa dia midika ho vidin'ny vidiny lehibe kokoa, hoy ny Consumer Reports. Miezaha mitady ny fandanjana tsara indrindra eo amin'ny habe sy ny teti-bolanao. Raha misafidy kodiarana lehibe kokoa ianao rehefa mividy ny fiaranao, dia mety tsy ho hitanao io fiakaran'ny vidiny io amin'ny voalohany, fa rehefa tsy maintsy soloinao ny kodiarana sy kodiarana lehibe kokoa dia hanana vidiny ambony ianao raha oharina amin'ny olona iray mitondra fiara kely kokoa kodiarana.
Vantany vao misafidy haben'ny kodiarana ho an'ny fiaranao ianao dia te-hifikitra amin'io habe io rehefa mividy solo. Ny antony mahatonga an'io dia ny kodiarana hafa tsy mitovy habe dia mety hampisavoritaka ny hafainganam-pandehanao ary mety hiteraka fahasimbana amin'ny rafitra fanamafisam-peo manohitra ny hidim-baravaran'ny fiara aza sy ny fikajiana ny rafitra fitoniana. Izany dia mihatra amin'ny famindrana amin'ny kodiarana kely sy kely kokoa. Ny fanovana ny kodiarana lehibe kokoa miaraka amin'ny haavon'ny sisin-tany tsy mety dia mety hiteraka fahasimbana amin'ny rafitra fampiatoana ny kodiarana, ny kodiarana ary ny kodiaranao, ary mety hitera-doza amin'ny famakiana speedometrika diso.
Na izany aza, raha mampifanaraka ny haben'ny kodiarana misy savaivony lehibe kokoa ianao amin'ny haben'ny kodiarana ambany kokoa, dia tsy tokony hahita fiovana ny refesinao sy ny refometatra anao. Ity fananganana ity dia midika fa ny kodiaranao dia misy sisin-dàlana fohy kokoa, izay midika hoe sidewalls henjana kokoa, ary vintana ambony kokoa ho an'ny fipoahana raha sendra lavadavaka ianao.
Rehefa soloinao ny kodiaranao dia miezaha hifikitra amin'ilay marika sy habe mitovy aminy, satria ny fifangaroana sy ny fampifangaroana dia mamela ny fiaranao amin'ny kofehy kodiarana samy hafa, izay mety hiteraka famonoana sy famoizana fatiantoka.
Torohevitra momba ny fividianana kofehy vaovao sy kodiarana
Ny mpamily antonony mety tsy mahalala izay tena tadiaviny rehefa miantsena kodiarana vaovao izy ireo, fa raha mbola mitadidy fitsipika ifotony vitsivitsy ao an-tsainao ianao dia mora ny manolo ny kodiarana sy ny rims.
Ahoana ny fomba famakiana haben'ny habe
Rehefa mitady kodiarana vaovao ianao dia hahita anarana habe toy ny 235 / 75R15 na P215 / 65R15. Ireto marika ireto dia mety hampifangaro raha tsy azonao antoka ny famakiana azy ireo, fa raha vao mianatra ny fitenin'ny kodiarana ianao dia lasa mazava kokoa.
Eo amin'ny ilany havia amin'ny marika slash dia hahita isa telo ianao ary indraindray litera. Ny isa dia maneho ny halehiben'ny kodiarana, amin'ny milimetatra, hatrany amin'ny sisin-tany mankany amin'ny sisin-tany. Arakaraka ny maha lehibe an'io isa io no arakaraka ny hamelezan'ny kodiarana.
Raha mahita litera amin'ny ilany havia ianao, dia manondro ny karazana kodiarana. Taratasy mety hitanao dia:
"P", ho an'ny kodiaran'ny fiaran'ny mpandeha. Ity taratasy ity dia mampahafantatra anao ihany koa fa ny kodiarana dia natao mba hanaraka fenitra any Etazonia. Rehefa tsy misy taratasy dia midika izany fa natao hanarahana fenitra eropeana. Ireo karazany roa dia samy manana ny fahaizany enta-mavesatra.
"LT", ho an'ny kamio maivana. Ny haben'ny ban izay manomboka amin'ireo litera ireo dia natao hampiasaina amin'ny kamio maivana. Hanana tolo-kevitra psi ambonimbony kokoa izy ireo handraisana tsara ny tranofiara sy ny enta-mavesatra.
"ST", ho an'ny tranofiara manokana. Ny haben'ny kodiarana amin'ireo litera ireo dia ho an'ny kodiarana tranofiara ihany.
Amin'ny fampiasana kodiarana P215 / 65R15-ohatra dia azontsika atao ny milaza fa ho an'ny fiara mpandeha ny kodiarana ary manana sakany 215-milimetatra.
Eo amin'ny ilany ankavanan'ny marika slash dia hahita isa roa ianao, litera iray ary isa roa hafa. Ny isa voalohany dia maneho ny tahan'ny taha amin'ny haavon'ny kodiarana amin'ny sakany. Ao amin'ny ohatra P215 / 65R15 anay, ireo isa ireo dia 65, midika izany fa ny haavon'ny sisin'ny kodiarana dia 65% lehibe tahaka ny sakan'ny kodiarana. Ny litera afovoany amin'ny ilany ankavanan'ny slash dia milaza aminao ny fomba fanamboarana ny kodiarana ary matetika dia ny "R" na radial. Midika izany fa mihazakazaka mamaky azy ny sosona ny kodiarana.
Ny isa farany dia zava-dehibe, satria milaza aminao ny haben'ny kodiarana mifanaraka amin'ny kodiarana. Ao amin'ny ohatra asehontsika, ity isa ity dia 15, izay midika fa ny kodiarana dia mifehy kodiarana misy savaivony 15-inch.
Nanazava i Rayone fa indraindray, azo ekena ny fananana kodiarana sy sisin-dàlana hafa ho an'ny kodiarana aloha sy aoriana, izay antsoina hoe kodiarana mihoampampana. Hahita izany matetika ianao amin'ny fiara hozatra, toy ny Mustang, Challenger, ary Camaro. Ny antony miasa dia ny kodiarana any aoriana tsy mila mihodina tahaka ny kodiarana eo aloha.
Arakaraka ny haben'ny sisinao no mahasarotra sy lafo ny mividy kodiarana vaovao. Raha vantany vao manomboka mampiasa kodiarana lehibe ianao dia mety ho hitanao fa mpanamboatra kodiarana vitsivitsy ihany no manao ny habeny. Saingy, io olana io dia azo sorohina amin'ny ankapobeny amin'ny fiara eo amin'ny mpivarotra fiara.
Ny kodiarana lehibe amin'ny ankapobeny dia midika hoe kodiarana manify. Ny kodiarana dia tokony ho kely ampy hiditra ao anaty kodiarana tsara. Arakaraky ny halavitry ny kodiaranao no tsy dia vitanao intsony ny mandeha amin'ny lalana sy lavaka misimisy kokoa, izay mety hiteraka fipoahana.
Ny kodiarana sy ny kodiarana dia singa lehibe amin'ny fiaranao. Na dia toa somary miharihary aza izany, maro ny mpamily no tsy mieritreritra ny kodiarana nofidiny ho an'ny fiara, izay mety hiteraka olana maro tsy ilaina. Fantaro ny fiaranao ary aza avela hanao fahadisoana kodiarana mahatsiravina mba hiantohana ny kodiaranao ary hanome ny fiaranao ny haavon'ny traction mety indrindra.